Kely momba ny Norvezy - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Kely momba ny Norvezy
Ny mponina rehetra ao Norvezy tapitrisa ny olona
Norvezy dia tena mahagagaMahafinaritra ny natiora: crystal-mazava farihy sy renirano, ny ala matevina, tendrombohitra lehibe hatsaran-tarehy. Toy ny Norvezy dia ny mpandresy boloky hazo lehibe ny hery loharanon-karena fa dia ara-drariny lany ary noho izany, ny Norwegians dia heverina ho mpanankarena amin'ny firenena. Norvezy dia firenena iray, olon-tsotra, mendrika sy tena marina ny olona. Ny Norwegians be dia be momba ny tontolo iainana sy ny vola be tao amin'ny fiarovana ny toetra miavaka. Noho izany, tsy misy ny mampanofa, tsy misy potipoti-javatra ao amin'ny ala, ary indrindra fa any amin'ireo tanàn-dehibe sy ny vohitra. Any Norvezy, izay rehetra tena tsara, madio, ary toy ny hoe tsy nitoriana mihitsy ny olombelona tanana. Eto olona fiainantsika mifanaraka amin'ny natiora, mba hikarakara azy sy manohana rehetra simba. Tao Oslo ny renivohitra dia an-trano ny lehibe indrindra amin'ny isan'ny mponina, arivo Tanàna manana mponina telo alina mponina heverina ho lehibe. Norvezy dia ny toerana hahaterahan'ny maoderina tia manao ski ambony. Raha ara-bakiteny ny mandika ny teny norvejiana"ski"mahazo"tapa-kazo". Norvezy dia tena lafo firenena. Na dia eo aza ny zava-misy fa Norvezy dia ny firenena mpamokatra solika, lasantsy ao amin'ny firenena no lafo vidy, tokony ho Ariary isaky ny litatra. Rehetra miaraka ny zavatra lalana, dia afaka mahita ny vato piramida, ilay antsoina hoe"togi". Talohan stacked mba tsy ho very ny lalana ao mavesatra zavona na ny firotsahan'ny ranomandry. Ankehitriny"togas"ity dia fanomezam-boninahitra ny fomban-drazana, tsy misy olona mikasika azy ireo na manimba azy ireo. Ny Norwegians tsy manary ny vata foana. Rehetra am-bifotsy sy ny tavoahangy zavatra famokarana hanome ny magazay misy ny milina izay handray ny siny hoditra, manisa ary hanome ny maso. Manolotra ny cheque tao amin'ny checkout, izay namoaka vola.
Ny tena mahazatra amin'ny fitaterana ao Norvezy Bisikileta.
Ary Norwegians tsy inona na inona ny toetrandro, raha fanala, dia ilaina ny akanjo tamim-pitiavana, ary raha ny orana Norwegians mitaingina bisikileta amin'ny raincoats na eo elo. Ny mponina ao Norvezy, amin'ny lafiny iray, manodidina ny ranomasina, ary ny tany tsy maintsy mafy orina ala. Norwegians dia nazoto mpanjono, izy dia nahay hazan-dranomasina, fa tanteraka no tsy mahatakatra ny ala, tsy misy holatra, na izaho, na ny fananana ny anana.
Sy ny vokatra avy amin'ny holatra ny ala ny Norvezy dia lehibe loatra hany ka ny olona iray nandritra ny ora roa dia afaka hanangona ny litatra kitapo ny holatra tsy misy olana be.
Ny vokatra dia lafo vidy nefa ambony toetra
Ny Norwegians dia tena gaga sy faly fahalalana momba ny zavatra holatra, anana sy I. Maro ireo mino fa ny zavatra be herim-po sy mampidi-doza ny olona, raha toa ka mandeha any amin'ny ala mba hanangona ala mamokatra. Voalohany hitan'ny olona ny Norvezy ny fjords dia tery, winding-bays amin'ny mazava tsara an'izao rano voahodidina majestic harambato sy ny bibidia ny ala.
Ny fjords dia manaitra ny hatsaran-tarehy, ny halehiben'ny, mbola tsy nitoriana mihitsy ny sivilizasiona, mahafinaritra ny voninkazo sy ny loko ny hazo sy ny rano.
Reine dia fanjonoana tanàna miorina eo ny tarehy Arctic Saikinosy Moskenes ary dia diso fantatra amin'ny hoe ny tsara tarehy indrindra amin'ny tanàna any Norvezy.
Ao an-tanàna velona sivy amby roapolo olona.
Ny Troll ny lela ny lehibe overhang ao amin'ny harambato Skjeggedal mijoalajoala ny farihy Engelsman amin'ny haavon'ny telo-polo dimy metatra ary manana ny endriky ny teny, ary dia toy izany no nahazoany ny anarany.
Ny hahatratra izany rindriny, ianao ihany no afaka mandeha indrindra ny fomba dia tsy maintsy hihanika ny tendrombohitra sy mandray ny manontolo mananika nandritra ny ora dimy.
Alesund, malaza amin'ny fizahan-tany ny tanàna any amin'ny morontsiraka Andrefan'i Norvezy. Alesund dia iray amin'ireo vitsy voatahiry tanàna eto amin'izao tontolo izao.
Tsy mahazatra ny endriky ny trano amin'ny tilikambo, akanjo ny fitaovam-piadiana sy ny sary sokitra, ny tanàna azony tamin'ny alalan'ny zava-doza.
Amin'ny sivy ambin'ny folo teo an-tanàna dia rava tanteraka ny matanjaka indrindra ny afo, hafahafa ampy, fa tsy iray monina no namoy ny ainy, fa an'arivony ireo mponina sisa tsy misy tafo eo ny lohany. Naverina tamin'ny laoniny ny tanàna ny mari-trano. Preikestolen harambato amin'ny efa ho tanteraka fisaka ambony momba ny dimy amby roapolo metatra, miaraka amin'io fomba fijeriny. Preikestolen midika hoe"ny filazan-tsara". Ny lalana momba km sy maka adiny roa satria tsy maintsy mandeha eo amin'ny vatolampy lehibe. Ary mazava ho azy any Norvezy ianao dia afaka mahita ny tsy mampino ny hatsaran-tarehy ny Avaratra jiro izany Aurora Borealis.
Fotoam-pivoriana tsy misy fisoratana anarana sy maimaim-poana
Tanger möten: en dejtingsajt
Chatroulette lahatsary Mampiaraka ny vehivavy mba hitsena ny vehivavy Mampiaraka ny fisoratana anarana maimaim-poana fantaro ny tanàna amin'ny chat roulette online free ankizivavy online hitsena anao video mpivady Mampiaraka maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana ny fiarahana amin'ny aterineto